MACLUUMAADKA IYO SAWIRO MUUJINAYA DOG JARMALKA - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawiro Muujinaya Dog Jarmalka
Ey adhijir Jarmal ah oo saafi ah.
Liistada eeyaha adhijirka ah ee loo yaqaan 'German Shepherd Mix Breed Dogs'
Ey adhijir Jarmal ah
Ger-nin adhi-jir ah
Eyga Shepherd Dog ee Jarmalka waa mid si fiican loo dheellitiray oo aad u xoogan. GSD wuxuu leeyahay jir adag, muruqyo, xoogaa dheer oo leh iftiin, qaab dhismeedka lafaha oo adag. Madaxa waa inuu ahaadaa mid u dhigma jidhkiisa, wejiga waxyarna wareegsan. Sanka inta badan waa madowyahay, hase yeeshe, buluug ama beerka wali mararka qaar wey dhacaan, laakiin waxaa loo arkaa qalad oo lama muujin karo. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyo maqas ah. Indhaha madow waxay u eg yihiin yicib, weligoodna ma soo baxaan. Dhegaha ayaa ku ballaadhan salka, farta lagu fiiqayo, toosan oo hore u jeeda. Dhegaha eeyaha yaryar ee ka yar lix bilood ayaa waxoogaa hoos u dhici kara. Dabada hawadu waxay gaadheysaa hoosta hoosta oo waxay hoos u laallaabtaa marka eeydu nasato. Lugaha iyo garbaha hore waa muruq muruqyada bowdyaduna way adag yihiin oo way adag yihiin. Cagaha wareega waxay leeyihiin cago adag. Waxaa jira seddex nooc oo ah Adhijirka Jarmalka: jaakad laba jibbaaran, jaakad dheeri ah iyo jaakad dhaadheer. Koodhku badanaa wuxuu ku yimaadaa madow oo leh midab, suuf ama dhammaan madow, laakiin sidoo kale wuxuu ku imaan karaa caddaan, buluug iyo beer, laakiin midabadaas waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin qalad marka loo eego heerarka badankood. Eeyaha cad ee GSD waxaa loo aqoonsan yahay inay yihiin nooc gaar ah oo naadiyada qaarkood waxaana loogu yeeraa Adhijirka Cad ee Mareykanka . Midab piebald ah ayaa sidoo kale ka dhacay hal khad dhiig oo GSD ah oo hadda loogu yeero a Panda Shepherd . A Panda waa 35% caddaan inta hartay midabkeedu waa madow iyo madow, mana lahan Shepherds cadaan Jarmal ah oo ku abtirsada.
Badanaa waxaa loo isticmaalaa sida eeyaha shaqeeya, Adhijirka Jarmalka waa geesinimo, feejignaan, feejignaan iyo cabsi la'aan. Farxad, adeecid iyo u hamuun qab barasho. Deganaan, kalsooni, dhab ah oo xariif ah. GSDs waa kuwo aad u aamin ah, oo geesiyaal ah. Mar labaad kama fekerayaan inay naftooda u bixiyaan xirmooyinkooda aadanaha. Waxay leeyihiin awood waxbarasho sare. Adhijirka reer Jarmal waxay jecel yihiin inay u dhowaadaan qoysaskooda, laakiin waxay ka digtoonaan karaan shisheeyaha. Noocani wuxuu ubaahanyahay dadkiisa mana aha in lagukala baxo cidlo mudo dheer. Waxay ciyi karaan oo keliya markay dareemaan inay lagama maarmaan tahay. Badanaa waxaa loo isticmaalaa sida eeyaha booliiska, Adhijirka Jarmalka wuxuu leeyahay dareen ilaalin aad u xoog badan, wuxuuna aad ugu daacadsan yahay gacantiisa. Bulsho noocani wuxuu si fiican uga bilaabanayaa eey. Gardarada iyo weerarada dadka loo geysto waxaa sabab u ah maamul xumo iyo tababar xumo. Dhibaatooyinka ayaa soo ifbaxaya markii milkiilaha uu u oggolaado eeyga inuu aamino inuu yahay hogaamiyaha xirmada ka badan aadanaha iyo / ama uusan siinin eeyga jimicsi maskaxeed iyo jireed maalin kasta waxay u baahan tahay inay xasilloonaato Noocani wuxuu ubaahan yahay milkiileyaasha kuwaas oo ah dabiici ahaan awood leh in ka badan eeyga si deggan, laakiin adag, kalsooni leh iyo hab joogto ah. Eyga xasilloon, hagaagsan, iyo tababbaran ayaa badiyaa guud ahaan ku wanaagsan xayawaannada kale oo aad ugu fiican carruurta qoyska. Waa inay si adag ugu tababaranyihiin adeecida laga soo bilaabo da'da hore. Adhijirka Jarmalka oo leh milkiileyaal dadban iyo / ama dareenkooda aan la fulin waxay noqon karaan kuwo xishood badan, xariif ah oo u nugul cabsi qaniinyada oo horumarisa ilaalin arrinta . Waa inay ahaadaan tababaray isla markaana bulshada dhexdeeda laga bilaabo yaraantiisii. Adhijirka reer Jarmal ma dhagaysan doonaan haddii ay dareemaan inay ka maskax adag yihiin milkiilahooda, hase yeeshe sidoo kale sifiican ugama jawaabi doonaan anshaxa adag. Milkiilayaashu waxay u baahan yihiin inay yeeshaan hawo awood dabiici ah oo ku saabsan dabeecadooda. Ha daaweyn eeygan sida inuu yahay aadanaha . Baro dareen canine oo eyda ula dhaqan. Adhijirka Jarmalka waa nooc ka mid ah kuwa ugu caqliga badan uguna tababaran. Eygan shaqeeya ee xirfadda sare leh ayaa la imanaya wado shaqo iyo hawl nolosha ah iyo hoggaamiye xirmo joogto ah si loo tuso hagitaan. Waxay u baahan yihiin meel ay ka soo qaadaan tamarta maskaxeed iyo tan jireed. Tani ma aha nooc ka mid ah oo ku farxi doona inuu si fudud ugu seexdo qolkaaga fadhiga ama uu ku xirmo daaradda guriga. Noocani waa mid caqli badan oo si fudud wax u barta oo loo isticmaalay sida ido, eey waardiye ah, shaqada booliska, hage indhoolayaasha, adeegga goobidda iyo samatabbixinta, iyo milatariga. Adhijirka Jarmalka sidoo kale wuxuu ku fiicanyahay waxqabadyo badan oo kale oo ey ah oo ay ku jiraan Schutzhund, raad raac, adeecid, firfircoonaan, kubbadda duulista iyo isboortiga giraanta. Sanka sankiisa ayaa urin kara daroogada iyo kuwa ku soo xadgudbay , oo uga digi karaa kuwa ka shaqeeya meelaha ay joogaan miinooyinka dhulka hoostiisa waqtigooda si looga fogaado qarxinta, ama gaaska ku sii daaya tuubbo lagu aasay 15 fuudh dhulka hoostiisa. Adhijirka Jarmalka sidoo kale waa riwaayad caan ah iyo wehel qoys.
rhodesian ridgeback muqisho isku darka adhijir Jarmal for sale
Taranka kala sooc la'aanta ayaa horseeday cuduro la iska dhaxlo sida miskaha iyo xusulka dysplasia, xanuunada dhiiga, dhibaatooyinka dheefshiidka, buunbuunin , suuxdin, cambaar joogto ah, keratitis (caabuq ku dhaca kiliyaha), fawdo iyo xasaasiyadda boodada. Sidoo kale waxay u nugul yihiin burooyinka qanjirada (burooyinka ku dhaca beeryarada), DM (cillad ba'an), EPI (infekshinka jirka ee 'exocrine pancreatic insufficiency'), iyo fistulas perianal iyo cudurka Von Willebrand.
Adhijirka reer Jarmalku kuma fiicnaan doono guri dabaq ah haddii jimicsi ku filan uu sameeyo. Iyagu waxoogaa dhaqdhaqaaq ah kuma jiraan gudaha waxayna ku fiican yihiin ugu yaraan daarad weyn.
Eyda Shepherd Dogs-ka waxay jecel yihiin waxqabad adag, waxaana doorbidayaa isku darka nooc ka mid ah, eeyahaani waa kuwo aad u caqli badan isla markaana jecel tartan adag. Waxay u baahan yihiin in la qaato maalin kasta, kacsan, socod dheer , orod ama ku garabsoco markaad baaskiil wado. Inta lagu jiro socodka eeyga waa in loo sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaashiisa qofka haya hogaanka, sida maskaxda eeyga maskaxdiisa hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu noqdo aadanaha. Adhijirrada badankood waxay jecel yihiin inay ciyaaraan kubbadda ama Frisbee. Toban ilaa shan iyo toban daqiiqo oo la soo raaco oo ay la socdaan socod maalinle ah ayaa eeygaaga daalin doona si aad u fiican sidoo kale waxay siin doontaa dareen ujeedo. Hadday tahay kubad baacsiga, qabashada Frisbee, tababarka addeecista, kaqeybgalka kooxda ciyaarta canine ama qaadashada socod dheer / jog, waa inaad diyaar u noqotaa inaad bixiso nooc ka mid ah jimicsi maalinle ah, oo wax dhisaya. Jimicsiga maalinlaha ah waa inuu had iyo jeer ku jiraa socod / jog maalinle ah si loo qanciyo dareenka hijrada eeyga. Haddii jimicsi yar iyo / ama maskax ahaan caqabad ku noqoto, noocani wuxuu noqon karaa nasasho la'aan iyo burbur . Shaqada ugu fiican ayey ku qabataa.
american bulldog isku-dhafka shaybaarka madow
Qiyaastii 13 sano.
Noocani wuxuu si joogto ah u daadiyaa timo xoogaa ah oo xilliyadiisu culus tahay. Waa inay cadayaan maalin kasta ama waxaad timo ku yeelan doontaa gurigaaga oo dhan. Maydho oo keliya marka ay lagama maarmaanka u tahay qubayska oo keliya waxay sababi kartaa cuncun maqaarka ka yimaada saliidda oo yaraata. Hubi dhegaha iyo ciddiyo jarista si joogto ah.
Magaalada Karlsruhe, Jarmalka, Captian Max von Stephanitz iyo kuwa kale oo heersare ah ayaa soo saaray jawaab celin, adeecid iyo qurux badan oo Shepherd Jarmal ah iyagoo adeegsanaya dhogorta dhaadheer, gaagaaban iyo silig-dhogorta leh iyo eeyaha beeraha ee Wurtemberg, Thurginia iyo Bavaria. Eeyaha ayaa lagu soo bandhigay Hanover sanadkii 1882, noocyada kala duwan ee timaha yar ayaa markii ugu horaysay lagu soo bandhigay magaalada Berlin 1889. Bishii Abriil 1899, von Stephanitz waxay u diiwaangalisay eey magaciisu yahay Horan inuu yahay kii ugu horreeyay ee Deutsche Schäferhunde, oo macnaheedu yahay 'Eey Shepherd Dog' oo Ingiriis ah. Ilaa 1915, noocyo dhaadheer iyo kuwo silig leh ayaa la muujiyay. Maanta, waddamada badankood, kaliya jaakad gaagaaban ayaa loo aqoonsan yahay ujeeddooyin muujinaya. GSD-kii ugu horreeyay waxaa lagu soo bandhigay Ameerika 1907-dii waxaana aqoonsaday aaladda AKC sanadkii 1908. Eyda Shepherd ee Jarmalka ee loo adeegsaday filimada Rin-Tin-Tin iyo Strongheart ayaa fiiro badan u keenay taranka, taas oo ka dhigtay mid aad caan u ah.
GSDCA = Naadiga Eyga ee Adhijirka Jarmalka ah ee Ameerika
Max Adhiyaha Jarmalku wuxuu ahaa eey yar oo jira 3 bilood oo ka yimid Pakistan— 'Waxaan ka helay saaxiibkay markii uu hal toddobaad jiray'
Titan ee Jarmalka Adhiyaha eeyaha ah ee 6 bilood jira.
'Kani waa Lewis, shan jirkeena Jarmalka ah ee Shepherd Dog. Isagu waa eeyga ugu aaminka badan uguna jecel ee aad waligaa jeclaan lahayd. Wuxuu jecel yahay socodka dheer ee buuraha aan ku nool nahay Scotland, laakiin marka guriga gabi ahaanba waa wax aan sharci aheyn. Hadday guriga ku jirto wuxuu si xiiso leh u daawan doonaa hawl kasta oo la qabanayo, haddii uu bannaanka ka joogo isagu si farxad leh ayuu u daawanayaa annaga oo dhiseyna gurigeenna — iyadoo mararka qaarkoodna ay ku mashquulinayaan martinnada deggan oo liqaya, ama shinnida !! Markii uu yaraa, wuxuu qabay dhibaatooyin gardarro neerfayaasha ah waxaana nalagula taliyay in isaga la baabi'iyo. Sida iska cad uma nihin ujeedka arintaas waxaanan ku adkeysanay tababarkiisa. Hadda waa lala tacaali karaa dhibaato la'aan markii uu joogo dhakhtarka xoolaha, laakiin sidoo kale waa eey fiican oo waardiye ah oo ku wareegsan beerteenna iyo gurigeenna. Aad ayaan ugu hanweynahay isaga labadaba horumarka uu ku sameeyay dabeecaddiisa iyo sababtoo ah waa wiil qurux badan. Waxaan adeegsanay farsamooyin tababar oo kala duwan, laakiin waxaan dareemeynaa inaan ka helnay talooyin aad u qiimo badan hab dhaqanka eeyga Cesar Millan. Waad ku mahadsantihiin labadeena labadaba, waxaan leenahay eey qurux badan oo aan jecel nahay inuu xoogaa yar.
'Kani waa Blixem, waa madowgeyga 5-jirka ah, 35-kg (77 rodol) oo ah Shepherd Jarmal ah kana socda RSA KZN, eey booliis oo shaqeeya. Wuxuu u tababbaran yahay addeecid iyo gardarro loo adeegsaday raadinta tuhmanayaasha baxsadka ah ee lugeynaya. Waxaa la gudoonsiiyay eeygii ugu fiicnaa intii uu ku guda jiray tababarkiisa dhanka adeecida, gardarada iyo daba galka. Isagu waa mid bulsheed oo jecel in la xannaaneeyo. Dhiirigelintiisu waa dareenkeyga shaqsiyeed iyo waqtiga aan u huray isaga taas oo gacan ka geysatay isku xirnaanta dhow ee aan leenahay. Fahamkiisa ku aaddan xiriirkeenna waa mid cajiib ah. '
Akela oo ah Adhijirka Jarmalka ah ee jira 9 sano
Samatabbixinta dadka waaweyn ee u shaqeeya Jarmalka ee Shepherd Dog oo jira 1 sano
Lahaanshaha sawirka Vom Haus Drage Kennel & Pet Resort
Lupo Adhijirka Jarmal ee mudada dheer qaatay 9 bilood— fiiri Lupo-koraysa
Prudy adhijirka reer Jarmal wuxuu qiyaastii 5 sano jir yahay sawirkan, sida had iyo jeer, wuxuu ceyrsanayaa kubbadda tennis-ka.
Riza (bidix) markuu jiro 1 sano iyo 6 bilood iyo Hitman (midig) markuu jiro 6 bilood — Hitman waa waxa loogu yeero a Panda Shepherd . Waa midab isku beddelid midabkeedu yahay 'German Shepherd Dog Dog' ee nadiifka ah ee ku dhaca hal xarig oo dhiig ah.
Eeg tusaalooyin badan oo ah Adhijirka Jarmalka
Sawirada Adhijirka Jarmalka 1
Sawirada Adhijirka Jarmalka 2
Sawirada Adhijirka Jarmalka 3
Sawirada Adhijirka Jarmalka 4
Sawirada Adhijirka Jarmalka 5
Sawirada Adhijirka Jarmalka ah 6
Sawirada Adhijirka Jarmalka 7
Sawirada Adhijirka Jarmalka 8
Eeyaha Shepherd: Sawirro guryo ah oo la ururin karo
basset hound cocker spaniel qas
eey kasta oo ka yar 50 rodol